Daawo muuqaalka: Muwaadiniin Soomaali ah oo lagu dilay dalka South Africa |
Daawo muuqaalka: Muwaadiniin Soomaali ah oo lagu dilay dalka South Africa
Kooxo Burcad ah oo hubeysan ayaa 14 kii saac ee la soo dhaafay dil u geystay Muwaadiniin Soomaaliyeed oo howlo ganacsi ka watay waddanka Koofur Afrika.
Dilalkan kala duwan ayaa 24 kii saac ee la soo dhaafay waxa ay ka dhaceen deegaano hoos yimaada magaalada Ceptown ee dalka South Afrika, waxaana dilkaasi geystay Burcad South Afrikan ah oo doonayay iney dhacaan hantida dadka Soomaalida ah ee ku Ganacsada dalkaasi.
Kooxaha Burcada ayaa xabado ku furay goob ganacsi oo ay lahaayeen ganacsato Soomaali ah, iyadoo rasaastana ay ku geeriyoodeen Laba dhalinyaro Soomaali ah waxeyna burcadu ka baxsadeen goobti ay dilka ka geysteen, sidaasi waxaa Radio Muqdisho u sheegay Liibaan Axmed oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida oo ka agdhawaa goobta dilku ka dhacay.
Ciidmada Booliiska ayaa goobta soo gaaray kadib markii uu dilku dhacay, waxeyna Ganaax lacageed u jareen mid ka mid ah dukaamada Soomaalida ee goobtaasi ku yaala kaas oo lagu eedeeyay inuu shaqeeynayay sharci la’aan.
Muwaadiniinta geeriyootay ayaa gabaldhicii shalay lagu aasay qubuuraha Muslimiinta oo ku yaala magaalada Ceptown.